नटुंगिने झगडाको बिऊ रोपेपछि अस्ट्रेलिया काँग्रेसमा भाँडभैलो !
निर्माण सञ्चार, प्रवास । नेपाली काँग्रेस केन्द्रीय सदस्य गगन थापा जुन कार्यक्रमका लागि अस्ट्रेलिया गएका थिए, उनी नफर्कंदै अस्ट्रेलियामा रहेका काँग्रेस निकट जनसम्पर्क समितिहरु विवादमा फसेका छन् ।
नेता थापाले आफू नफर्कंदै समितिहरुलाई विवादमा फसाउने त्यस्तो के काम गरेछन् जसले गर्दा उनको यसपालाको अस्ट्रेलिया भ्रमण र एनजिओमा खाएको आतिथ्यता नै बोझिलो भएको छ ? प्रश्न उठिरहेको छ ।
थापा जनबरी १२ मा सिड्नी उत्रिएका थिए ।
उनी त्यहाँ जानुको औपचारिक निम्तो भने अस्ट्रेलियामा रहेको एनजिओ ‘जीवन उत्थान बालगृह’ संस्थाको च्यारिटी (सहयोग संकलन) कार्यक्रम रहेको थियो । मेलबर्डनमा आतिथ्यता खाएका थापा उत्रँदा भने सिड्नीमा उत्रिएका थिए ।
सिड्नी विमानस्थलमा उनलाई अस्ट्रेलिया जनसम्पर्क समिति काँग्रेसका अध्यक्ष कृष्ण गिरीले स्वागत गरेका थिए ।
स्वागतमा जनसम्पर्क समिति, नेका, सिड्नी, अस्ट्रेलियाका अध्यक्ष गिरीलाई आफ्नै नेताले विवादमा फसाएर जालान् भन्ने सायद सोचेका पनि थिएनन् ।
गिरीका साथमा विमानस्थलसम्म कष्ट गर्नेहरुमा जनसम्पर्क अस्ट्रेलियाका राजेश केसी, हिरा कँडेल, जीवन उत्थानका (एनजिओ) का पासाङ सेर्पा, मनिस कोइराला लगायत रहेका थिए ।
१२ जनवरीकै साँझ नेता थापा जीवन उत्थान अस्ट्रेलियाले आयोजना गरेको च्यारीटि कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि बने ।
एनआरएनए उपाध्यक्ष नन्द गुरुङ समेत सहभागी उक्त कार्यक्रमपछि उनी मेलबर्न हानिए जुन कुरा सिड्नीमा स्वागत गर्ने कार्यकर्ताहरुको मुटुमा बज्र हानेझैं बज्रियो ।
नेपाली काँग्रेस निकट अस्ट्रेलिया जनसम्पर्क समितिहरु यतिबेला झनै विवादमा परेका छन् ।
३ वटा समितिहरुमा कुन वैधानिकता भन्ने प्रश्न उठिरहेका बेला नेता थापा विमानस्थलमा एउटाको भोजले मोज गर्न पुगे भने अतिथि खान चाहिँ ‘विवादास्पद’ भनिएको समितिको कार्यक्रममा पुगेपछि यसले निको नहुने झगडाको बिऊ रोपिएको हो ।
शनिबार पुगेर ३ वटा अतिथि खान भ्याएको थापाका लगभग सबै कार्यक्रमहरु विवादित बन्ने पुगेपछि यतिबेला यहाँ भाँडाभैलो भएको छ ।
वैधानिक समितिलाई नै अवैधानिक गराउने गरी किन चलखेल गरेको भनी स्थानीय समितिका सदस्यहरुले सोधेपछि गगन आछुआछु भएका थिए ।
बसेर कुरा मिलाउन समितिका आधिकारिक भनिएका सदस्यहरुले बोलाउँदा पनि उनले ‘आफ्नो भ्रमण अवधि नै छाटो भएको’ भन्दै तर्किएपछि सिड्नी जनसम्पर्क समितिका सदस्यहरु रिसले चुरिएका हुन् ।
उनी आइतबारै नेपला फर्कदै छन् तर, उनी नफर्कदै उनी गएर अतिथि खाएको समितिले अस्ट्रेलिया काँग्रेसमा भने विभाजनको रेखा खिचेको छ ।
विवादकै कारण नेकाले आधिकारिकता दिन नसकेका बाँकी २ समितिमा एउटाको अध्यक्ष ‘मै हुँ’ भन्दै हिडेका छन् छिरिङ लामा भने अर्काे अध्यक्षका रुपमा ‘मै हुँ’ भनेर हिडिरहेका छन्।
विवादित भनिएको सुरेश पोखरेलको समितिको चाहिँ विधिवत अतिथि खाएपछि थापाको अस्ट्रेलिया भ्रमणको मक्सद नै समितिमा विवाद जन्माउनु रहेको पुष्टि भएको अरु जनसम्पर्क समितिका नेताहरुको ठम्याइ छ ।
केही दिन अघि संघीय संसद्मा विधि र प्रक्रिया मिचिए प्रति आपत्ति प्रकट गर्दै सार्वजनिक वक्तव्य दिएका नेता थापाले आफूभित्रको पार्टी जीवनमा भने आफैं विधि र प्रक्रिया भाँच्ने बाटोमा हिँड्दा रहेछन् भनी उनको अस्ट्रेलियाका नेपाली जनसम्पर्क समितिभित्र आलोचना भइरहेको छ ।